नयाँ वानेश्वरमा बेवारिसे अवस्थामा भेटियाे ४ कराेडको बिएमडब्लू कार, बेवारिसे भेटेपछि प्रहरी सशंकित – Etajakhabar
नयाँ वानेश्वरमा बेवारिसे अवस्थामा भेटियाे ४ कराेडको बिएमडब्लू कार, बेवारिसे भेटेपछि प्रहरी सशंकित
महानगरीय अपराध महाशाखा, टेकूको प्राङ्गणमा एउटा सेतो रंगको गाडी एक साताभन्दा बढी समयदेखि थन्किएको छ। प्रहरी कार्यालय पुग्ने गाडी साैखिन र जानकारलार्इ धुलोले छाेप्दै गएकाे यो चार पाङग्रेले आफूतिर तान्छ।
भारतीय नम्बर प्लेटको यो जीप विश्वमै महँगा गाडी निर्माण गर्ने जर्मनीको बिएमडब्लु कम्पनीको नयाँ सिरिजको हो। बेवारिसे अवस्थाको यो गाडी बिएमडब्लु एक्स ३ २० डि (एक्स थ्री ट्वान्टी डी) सिरिजको हो। नेपाली बजारमा यसको मूल्य ४ कराेड रुपैयाँभन्दा बढी पर्दछ।
यो विलाशी गाडी प्रहरी कार्यालयमा कसरी आइपुग्यो त? प्रहरी कार्यालय टेकू पुग्ने धेरैकाे यही प्रश्नकाे जवाफ खाेज्न अहिले प्रहरी अाफैँ लागिपरेकाे छ।
काठमाडौंको सडकमा बेवारिसे अवस्थामा याे गडी भेटेको दाबी प्रहरीको छ। बिएमडब्लुकाे अाधिकारिक बिक्रेता नेपालमा छैन। अटाे व्यवसायीहरू बेवारिसे अवस्थामा भेटिएकाे गाडी माेडल हेर्दा त्यसलार्इ नेपालमा करिब ४ कराेड रूपैयाँ पर्ने बताउँछन्।
महाशाखाका अनुसार कार बानेश्वर क्षेत्रमा अलपत्र रहेकाे सूचना पाएपछि महाशाखाको टोली पुगेकाे थियाे। कारकाे ‘लक सिस्टम’ नखुलेपछि प्रहरीले ट्राफिकलार्इ खबर गर्याे। ट्राफिक प्रहरीकाे र्याकरमा राखेर गाडी प्रहरीले अाफ्नाे कार्यालय ल्याएकाे हाे।
गाडीभित्र के छ? बिएमडब्लुका गाडी सवारीधनीले जहाँ कहीँबाट लक गर्न सक्छन्। प्रहरीले बेवारिशे फेला पारेको गाडी त्यस्तै लक अवस्थामा भेटिएकाे थियो। महाशाखाका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर गाडी खोल्ने प्रयास गरेको तर प्राविधिक नपाएको बताउँछन्।
‘हप्ता दश दिनदेखि गाडी यहीँ छ। गाडीमा भित्र के छ? केही थाह छैन, खोल्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ एसपी राठौरले नेपालखबरसँग भने।
प्रहरीले बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेको एचआर ४६ डि १७८० नम्बरको सेतो रंगको बिएमडब्लु गाडी दिल्लीको डचे मोटोरनबाट बिक्री भएको हो। गाडीमा साे कम्पनीकाे स्टिकर टाँसिएकाे पनि छ। भारतको रोड एण्ड ट्राफिक अथोरिटीको कार्यालय रोहतक हरियाणामा दर्ता जीपका धनी बीरेन्द्रर सिंह हुन्।
२० सेप्टेम्बर २०१३ मा अथोरिटीमा दर्ता भएको गाडीको १० अगस्ट २०१७ मा फिटनेस र २९ जुलाई २०१७ सम्मको बिमा गरिएको भारतको रोड ट्रान्सर्पोट एण्ड हाइवे मन्त्रालयको आधिकारीक वेब साइटमा उल्लेख छ।
प्रहरी स्रोतअनुसार सो गाडी केही समयदेखि काठमाडौंको सडकमा घुमिरहेकाे थियो। अचानक त्यही गाडी बेवारिसे भेटेपछि प्रहरी सशंकित छ। गाडीको रहस्य सुल्झाउन प्रयास गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरु छेउटुप्पो हातपार्न सकिरहेका छैनन्।
थप केही दिनसम्म पनि गाडीको दाबी गर्न कोही नआएमा प्राविधिक झिकाएर गाडी खोल्ने र अनुसन्धान गर्ने महाशाखाको तयारी छ। ‘गाडी खाेलेर अनुसन्धान गर्न खाेजिरहेका छाैं। अनुसन्धानपछि विवरण सुरक्षित राखी गाडी भन्सार कार्यालय बुझाउँछाैं’, एसपी राठाैर भन्छन्।
(नेपाल खबरका लागि दिपक खरेलले लेखेको यो समाचार हामीले साभार गरेका हौ)
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ०१, २०७५ समय: १८:५५:३४